Cirka Hindiya oo u baahan ballaarin
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Hindiya » Cirka Hindiya oo u baahan ballaarin
Airlines • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Wararka Hindiya • News • Dib-u-dhiska • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Cirka Hindiya - sawirka waxaa iska leh VV Krishnan
Hindiya waa inay soo dhaweysaa awoodda hawada ee la kordhiyay si dalxiiska loo helo kor u kac baahi weyn loo qabo. Ujeeddadan, in yar oo wadayaal ahi waxay muujiyeen bilowga adeegga cusub. Gaar ahaan, gobolka Sikkim wuxuu soo dhaweynayaa duullimaadyo cusub oo ay soo dirayaan Spice Jet iyo IndiGo.
Way adag tahay in maalin ay dhaafto maalmahan iyada oo aan wax war ah laga helin iyo horumarka dhinaca duulimaadka muhiimka ah, tanina waa sida runta ah ee cirka Hindiya. Iyada oo leh baaxadda ballaaran ee dalka iyo dadka ku nool, qaranku waa hubaal inuu ku qaban karo ballaadhinta cirka.
Awood kasta oo hawo oo dheeri ah waa in la soo dhoweeyaa, gaar ahaan tan iyo soo nooleyntii diyaaradda Jet Airways weli ma aysan gaarin qaabkeedii ugu dambeeyay iyo dib u dhigistii Air India ayaa mar kale dib u dhacday.
Laga bilaabo Janaayo 23, 2021, Sikkim, waa gobol xuduudeed waqooyi-bari ee Hindiya, waxaa lala xiriirin doonaa duulimaad toos ah oo ka yimaada Delhi oo ay soo qaaddo Spice Jet. Adeegga maalinlaha ah ee ka imanaya Delhi ilaa Pakyong waxaa u adeegi doonta diyaarad Bombardier Q400 ah.
Markii hore, Kolkata waxaa lala xiriiriyay Sikkim laakiin duulimaadka waxaa la joojiyay Juun 2019 sababo la xiriira saadka iyo infrail-ka. Adeeggan cusub wuxuu si fiican ugu habboon yahay qorshayaasha isku xirka meelo badan oo ka mid ah waqooyi-bari, oo leh awood dalxiis oo weyn. Sikkim sidoo kale wuxuu kujiraa warka maadama shiinuhu inta badan saamiga ka sheegto aagga.
Horumar kale, shirkadda duulimaadyada miisaaniyadda ee IndiGo waxay bilaaban doontaa 22-ka Febraayo 2021, iyadoo duulimaad ka bilaabi doonta Delhi ilaa Leh ee magaalada Ladakh taasoo qayb ka ah qorshaheeda si kor loogu qaado adeegyada ilaa toddobo marin. Isku xirnaanta, ganacsiga, iyo dalxiiska ayaa ka heli doona kor u kac soo dhaweyn ah adeegan cusub.
Sikkim wuxuu qayb ka yahay toddobada gabdhood ee walaalo ah ee waqooyi-bari, oo ay weheliyaan gobollada sida Tripura, Manipur, Arunachal, iyo Meghalaya. Hindiya waxay aad u danaynaysay inay horumariso gobolka maadaama ay leedahay awood dalxiis, baaxad weyn, iyo muhiimad siyaasadeed. Sikkim, oo horay u xukumay Chogyal, wuxuu ahaa maxmiyad ilaa 1970s markii lagu daray Hindiya.
Dalxiisayaal badan oo gudaha ah ayaa adeegsada xarunta Fasaxa Safarka ee Fasaxa, ka-dhaafitaan gunno / kaalmo uu ka helo shaqaaluhu shaqa-bixiyehiisa safarka fasaxa, si ay u aadaan gobolka.